पीडितले फेरिरहने बयानको समाजशास्त्र- विचार - कान्तिपुर समाचार
आश्विन २७, २०७६ नारायणी देवकोटा
स्त्री शक्ति विजय भएको प्रतीक मानिने विजयादसमी सुरु हुँदै गर्दा मुलुकमा स्त्रीशक्तिलाई कसरी दमन गरिन्छ भन्ने तथ्यको राष्ट्रिय नमुना प्रदर्शनी भयो । घन्टा-घन्टामा म्यासेन्जरको बक्समा यसबारे चासो वा चिन्ता आइरह्यो । त्यसैमध्ये एक थियो, ‘अब उनी सडकमा आउँछिन् ।’
यो पढेर म एकैपटक हेनरी इब्सेनको नाटक ‘डल्स हाउस’की नोरा र चिनियाँ लेखक ल्युसुनको अब ‘नोरा वेश्यावृत्ति गर्छिन्’ भन्ने निष्कर्ष सम्झन्छु । अनि मेरो आत्म थर्रर काँप्छ ।
एउटी मध्यम वर्गीय महिला ‘म शक्तिशाली (आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक) पुरुषबाट बलात्कारमा परेँ’ भनेर मध्येरातमा प्रहरी, महिला नेता र पत्रकारलाई खबर गर्छिन् । प्रहरी आउँछ र भोलि उजुरी दिनु भनेर फर्कन्छ, उनी उजुरी दिन जान श्रीमानलाई कुरेर बस्छिन् । पत्रकारलाई, आफू बलात्कारमा परेको, पहिल्यैदेखि यौन दुर्व्यवहार भोगेको बताउँछिन् । तर अर्को दिन उनको बयान फेरिन्छ, ‘डिप्रेसनको औषधी बढी खाएकोले के-के भनेँ थाहा छैन ।’ साथै उनी श्रीमानसँग प्रहरी कार्यालय जान्छिन्, तर आफूले झुटो बोलेको भनी विवरण लेखाउन । त्यस लगत्तै आउँछ, उनका श्रीमानले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमार्फत छुट्टाछुट्टै
बस्ने भनी गरेको निर्णयको लिखत । फेरि उनले आफू बलात्कारमा परेको भन्दै प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिन्छिन् । र फेरि प्रहरीको दबाबमा उक्त जाहेरी दिएको भनी लिखत सार्वजनिक गर्छिन् ।
दिनको सरदर तीन (वा बढी) जना महिला/बालिका बलात्कारमा परेको घटना आफ्नो ढड्डामा चढाइरहेको प्रहरीका लागि यो एउटा नमुना घटना बनेको देखिन्छ । पटक-पटक उनले आफ्नै कुरालाई काट्दै गरिरहेको अन्तर्वार्ता वा प्रेस नोट पढ्दा धेरैलाई ‘यो के तालकी महिला हो’ भन्ने परिरहेको देखिन्छ । तर बलात्कारका प्रभावितसँग काम गरिरहेका अधिकारकर्मीका लागि यो कुनै नयाँ विषय होइन । बलात्कारका कैयौं घटनामा पीडितले बयान फेर्छन् र पीडितको पक्षमा आवाज उठाइरहेका सहयोगीहरूलाई निराश तुल्याइदिन्छन् । पछिल्लो दुई वर्ष मैले देशभरका अधिकारकर्मी महिलासँग काम गरेँ । उनीहरूको सबैभन्दा धेरै गुनासो हुन्थ्यो, ‘पीडितले बयान फेरिदिन्छन्/फेरिदिए ।’ यसरी बयान फेर्ने पीडित कि बलात्कारका सिकार भएका हुन्छन् कि घरेलु हिंसाका । घरेलु हिंसामा परेर मानसिक र शारीरिक पीडाले औडाह हुँदा उनीहरू रुँदै आफ्नो श्रीमान वा परिवारका सदस्यले यातनाको दिएको भनी अधिकारकर्मी वा प्रहरी गुहार्छन् । जब घाउमा खत बस्न थाल्छ, उनीहरू बोली फेरिदिन्छन् । पीडक अझै राजनीतिक पहुँच भएको वा आर्थिक रूपमा बलियो परेमा घटनाको सुरुमै बोली फेर्छन् ।
केही वर्ष अधिकारका क्षेत्रमा काम गरेकाले घटनाको जानकारीसँग पक्कापक्की अनुमान लगाउन सक्छन्, ‘घटनाका पीडितले कानुनी प्रक्रियाको क्रममा बोली फेरिदिनेछन् वा पीडितले मुद्दा फिर्ता लिइदिनेछन् वा मिलापत्र गर्नेछन् ।’ अधिकारकर्मी डा. रेणु अधिकारीले कतै भनिसक्नुभएको छ, ‘एक तिहाइ बलात्कारका घटनाका प्रभावित बयान फेर्न बाध्य पारिन्छन् ।’ ठ्याक्कै तथ्यांक भन्न नसकिए पनि ठूलो संख्या बयान वा बोली फेरिदिने अवस्था आउँछ ।
शक्ति र सत्ताको भय
भनिन्छ, ‘बलात्कार पुरुषले महिलालाई कुनै आकर्षणको कारणले होइन, शक्तिको उन्मादले गर्छ ।’ त्यो शक्तिको उन्माद मान्छेमा मुख्यगरी सामाजिक-आर्थिक पहुँच र राजनीतिक आधारमा विकसित एउटा मानसिक प्रक्रिया हो । यस्तो हैसियतको चर्चा गर्दा मलाई गाइने ठाडो भाकाको एउटा हरफको खुब याद आउँछ, ‘छोरीको करिमै कालो छ, न समाउने न टेक्ने डालो छ ।’ आजको मितिसम्म धेरै नेपाली महिला आर्थिक र सामाजिक रूपमा पुरुषमा निर्भर छन् । महिलाको आफ्नै नाममा सम्पत्ति कति छ ? पैतृक सम्पत्तिमा त महिलाको पहुँच भर्खर कानुनी रूपमा स्थापित हुँदैछ । स्थापित कानुन अनुसार अहिले पनि अपवाद बाहेक बाआमाले छोरीका लागि अंश छुट्याएका छैनन्, छोरालाई छुट्याउँदा । नछुट्याए पनि बाआमासँग अंश माग्ने छोरीहरूलाई आज पनि समाजले बहिस्कार गरेको छ ।
चिटिक्क परेको लुगा लगाएर कार्यालयमा काम गर्ने धेरै महिला पनि आफूले बुझेको तलब जस्ताको तस्तै घरका ‘सो कल्ड अनर’हरूलाई बुझाउनुपर्ने मानसिक दबाबमा छन् । पाइला-पाइलामा पुरुषको सहयोग र निर्देशन कुर्नुपर्ने बाध्यतामा छन्, उनीहरू । बलात्कारका घटनामा पनि महिलाबारे निर्णय गर्ने अघोषित ‘अनर’हरू नै छन् । जो शक्ति र पैसाका अगाडि महिलाको अस्मितालाई ‘जाबो’ सम्झन्छन् । पीडक पक्ष र पीडितका कथित अनरहरूलाई महिलामाथिको यौन उत्पीडन केही मिनेटको रमाइलोमात्रै लागिदिन्छ । र महिलाहरू आफूमाथिको हिंसाका अभिव्यक्तिलाई फिर्ता लिन बाध्य हुन्छन् । जहिलेसम्म महिला आफ्नै घरभित्र दोस्रो दर्जाका नागरिक रहन्छन्, तबसम्म उनीहरूको बोली उनीहरूकै हुँदैन ।
सम्बन्धको गलत अर्थ
पछिल्ला समय यौनहिंसा वा उत्पीडनका घटनामा हिंसाका पीडक र पीडितको सम्बन्धलाई लिएर धेरैले ‘मन मिल्दा माया, मन नमिल्दा बलात्कार’ भन्ने गरेका छन् । भनाइ सही हो— बलात्कार हुने नै मन नमिलेपछि हो । प्रेम, सहमतिमा यौन सम्बन्ध, यौन व्यापार र बलात्कार चारवटा छुट्टाछुट्ट्टै पक्ष हुन् । समाजमा यी चारवटै सम्बन्ध छन् । मसिनो रेखाले मात्रै यिनीहरूलाई छुट्याउँछ । र त्यो रेखा सम्बन्ध भोग्नेहरूको नितान्त निजी अनुभवमा आधारित कुरा हो । तर मानिसहरू यसलाई आफ्नो ज्ञान, बुद्धि र समाजको चलन अनुसार बुझ्ने र व्याख्या गर्ने गर्छन् । जुन समय अनुसार परिवर्तन हुँदै गएको पनि छ । जहिलेदेखि मानव जीवन छ, त्यही बेलादेखि आपसी प्रेम, यौन आकर्षण, कतिपय अवस्थामा जबर्जस्ती र उत्पीडन पनि छ । मानव सभ्यता विकास हुने क्रममा मानिसले विस्तारै परिवार बसाउन थाल्यो, नीति-नियम बन्न थाले, मान्छेले आफूहरूमाथि भएका विभिन्न उत्पीडन अन्त्यका लागि सामुहिक पहल र काम गर्न थाले । तिनैमध्ये यौन उत्पीडन पनि एक हो ।
मानव सभ्यताको लामो समयसम्म महिलाको यौनिकतालाई समाजले पवित्रता र समाजको लज्जासँग जोडियो । त्यसैले महिलाहरूले बलात्कारका कुरालाई चुपचाप आँसुका घुट्कोसँग निल्दै आए, कतिपय अवस्थामा अझै यही स्थिति छ ।
विस्तारै महिलाहरू बोल्न थाले । बोली चर्को हुँदै जाँदा, ‘प्रेमिका, यौनकर्मी र आफ्नै श्रीमतीसँग पनि जबर्जस्ती यौनकार्य हुन्छ भने त्यो बलात्कार हो’ भन्ने मान्यता स्थापित हुँदै गयो । यो मान्यता स्थापित गर्न धेरै महिलाले परिवार, प्रेमी र राज्यसँग जीवनको मूल्य चुकाएका छन् । यही मान्यता बमोजिम वर्तमान नेपालको कानुनले आफ्नी श्रीमतीमाथि पनि जबर्जस्ती गर्न छुट दिएको छैन । वैवाहिक बलात्कारको कानुन भएको र आफ्नै परिवारका सदस्य (बा, काका, मामा, दाइभाइ, छोरासम्मले) ले समेत बलात्कार र यौन दुर्व्यवहार गरेका घटना सार्वजनिक भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा पीडित र पीडकको सम्बन्ध कति लामो समयदेखि थियो भन्ने पक्ष गौण हो । तर पीडकको पहुँच, प्रभाव, कतिपय अवस्थामा आर्थिक प्रलोभन, भावनात्मक दबाब र कानुनी प्रक्रियामा गरिने गैरजिम्मेवार व्यवहारका कारण कतिपय अवस्थामा पीडितहरू बलात्कारलाई पनि प्रेम मानिदिएर चुपचाप बस्न वा बयान फेर्न बाध्य हुन्छन् ।
असहयोगी सामाजिक संरचना
आफूमाथि बलात्कार वा यौन दुर्व्यवहारका घटना बाहिर ल्याउने महिलालाई अहिले पनि समाजले राम्रो आँखाले हेर्दैन । बरु उनीहरूको नैतिकतासँग, पहिलादेखि भएको सम्बन्धसँग, हँसिलो वा मिजासिलो बानीसँग, रातविरात वा पुरुषहरूको माझमा गर्ने कामसँग र लगाउने लुगासँग जोडेर गलत व्याख्या गरिदिन्छन् । यस्तो समाजमा आफूमाथिको दुर्व्यवहार, शोषण वा उत्पीडनबारे बोल्न ठूलो साहस चाहिन्छ । बोलेपछि समाज र पीडकबाट आउने दबाबसँग लड्न महिलालाई परिवार र आफ्नो वरपरका मानिसको बलियो साथ चाहिन्छ । तर यस्तै बेलामा धेरै परिवारका मानिसले साथ छोडिदिन्छन् । उदाहरणका लागि, रोशनी शाहीकै घटना बाहिर आएको एक हप्ता नबित्दै उनका श्रीमानले पारपाचुके गरेको कुरा फेसबुकबाट सार्वजनिक गरे । अझै पीडक परिवारकै सदस्य भएको खण्डमा महिलाले घरमा पनि बस्न नसक्ने अवस्था आउने गरेको छ ।
प्रहरी पनि समाजकै एउटा अंग भएको हुँदा उसले पनि बलात्कार र यौन व्यवहारलाई धेरैपटक एउटै नजरले हेरेको पाइन्छ । महिलामाथि हुने हिंसाका घटनालाई प्रहरीले ‘व्यक्तिगत’ भनेर पन्छिएको वा खासै महत्त्व नदिएका धेरै घटना छन् । घरेलु हिंसालाई ‘परालको आगो’ वा यौनजन्य हिंसालाई ‘आपसी सम्बन्ध’ भनेर टारिन्छ । महरा प्रकरणमा पनि प्रहरीले घटनाको जानकारी पाएपछि प्रहरीले ती महिलामाथि थप हिंसा हुन सक्नेतर्फ सचेत भएर उद्धार गर्ने र बलात्कार भए-नभएको जाँच्न अस्पताल लैजाने जस्तो आधारभूत काम गरेको पाइएन । त्यसमाथि पनि महिलाले जाहेरी नदिएको भनेर आरोपितलाई उसै छोडियो ।
नेपालमा आज पनि ७० प्रतिशत बलात्कारका घटना प्रहरीको ढड्डामा नाम नचडी गुमनाम हुने गरेका छन् । प्रहरीले ‘उजुरी नपरेको’ बहानाबाजी गरिरहन्छ । तर बलात्कार फौजदारी कानुन भएकाले राज्यवादी हुन्छ । खबर पाएपछि घटनास्थल सुरक्षा गर्ने, पीडितलाई अस्पताल पठाउने, आवश्यक परीक्षण गर्ने र सुरक्षित स्थानमा राख्ने/पुर्‍याउने काम प्रहरीको हो । तर प्रहरी शक्तिको प्रभावमा पीडकलाई पक्रने/नपक्रने विषयमा अलमलमा परिरहन्छ ।
पीडक र पीडितबीच हुने असमान शक्ति सम्बन्धको कारण बलात्कार, यौन दुर्व्यवहार, उत्पीडन वा घरेलु हिंसाका घटनामा पीडितले बयान फेर्नु नौलो घटना होइन । तर पछिल्लो घटनामा पीडितको मानसिक तनाबलाई समेत जोडेर सामान्यीकरण गर्ने काम भएको छ । डिप्रेसनमा गएको, डिप्रेसनको औषधि खाएको वा आत्महत्याको कोसिस गरेको कुरालाई लिएर पीडितलाई पागल करार गर्न खोजियो । खासमा डिप्रेसन पागलपन होइन । र जहाँसम्म डिप्रेसनको औषधि धेरै खाएको कारण आफूले बोलिरहेको कुरा याद हुँदैन भन्ने प्रसंग सरासर गल्ती भएको बताउनुहुन्छ, मनोसामाजिक विमर्शकर्ता बेबी शाह । खासमा डिप्रेसन तीन तह हुन्छन् । तीनमध्ये गम्भीर डिप्रेसनमा गएको मान्छेले पनि आफूले बोलेको बिर्सँदैन । त्यसो त मानिस किन डिप्रेसनमा जान्छ, किन आत्महत्याको अवस्थामा पुग्छ भन्ने नै गम्भीर सवाल हो । समाजशास्त्रको विद्यार्थी भएका कारण म समाजमाका विभेद, असमान शक्ति सम्बन्ध (आर्थिक, राजनीतिक दुवै), शोषण र दमनजस्ता सामाजिक विषय बढी हेर्ने गर्छु । मनोचिकित्सक त्यसलाई व्यक्तिको मनको तहसम्म अझ बढी गहिरिएर हेर्ने गर्छन् । जहाँ बेबी शाह भन्नुहुन्छ, ‘मानिस डिप्रेसनमा धेरै कुराले गएको हुन्छ । यौनसँग जोडिएका घटना (जो खुलेआम व्यक्त गर्न सकिँदैन) का कारण पनि धेरै मानिस डिप्रेसनमा गएका हुन्छन् ।’
बलात्कार भनेको दुई व्यक्तिबीच मन नमिल्दा-नमिल्दै गरिएको जबर्जस्ती हो । चाहे उनीहरू बीचमा दशकौँ लामो प्रेम, विवाह, यौन व्यापार वा पारिवारिक वा हाडनाताको सम्बन्ध नै किन नहोस् । यस्ता घटना प्राय: नदेखिने ठाउँमै हुन्छन् । प्रमाणहरू कम हुन्छन् । नैतिकपतनको विषयसँग जोडिएको हुँदा यस्ता घटना दबाउन आर्थिक प्रलोभन, डरधम्की र ज्यानै लिनेसम्मको हर्कत हुन्छन् । मुलुकमा यस विषयमा स्पष्ट कानुन भए पनि सामाजिक रूपमा धेरै मानिस (प्रहरीसमेत) अस्पष्ट हुने र शक्तिको प्रभावमा परेर सत्ता र शक्तितर्फ ढल्कने गरेका छन् । त्यसैले आफूमाथि पीडा भयोभन्दा पनि सहयोग नपाउने अवस्था भएकाले महिलाहरू उत्पीडनका घटना फिर्ता लिन बाध्य छन् । यो बाध्यता अन्त्यका लागि महिलालाई एक स्वतन्त्र नागरिक हुन दिनु नै पहिलो सर्त हो, जसले गर्दा ऊ आफूमाथि हिंसा हुँदा निर्धक्क बोल्न सकोस् । प्रकाशित : आश्विन २७, २०७६ ०८:४०
व्यक्ति : वालेस्टेइन 'लिगेसी'
पश्चिमाहरूले 'तिमीहरू पछौटे हौ, परम्परागत प्रविधि, राजनीतिक र संस्कार संस्कृतिका हिसाबले तिमीहरूभन्दा हामी विकसित छौं' भन्दै गरिआएको दावालाई वालेस्टेइनले 'तिम्रो विकास मूलतः शोषणमा आधारित हो' भनेर जोरी खोज्ने आधार तयार गरिदिए ।
भाद्र २१, २०७६ नारायणी देवकोटा
अगस्ट ३१ मा समाजशास्त्री चैतन्य मिश्रको किताब ‘लोकतन्त्र र आजको मार्क्सवाद’ को विमोचन थियो  । यो किताब आउनुअघिदेखि नै मिश्रले आफू युवा अवस्थाको हुँदा प्रभावित र लेखनमा केन्द्रित भएको सिद्धान्तबाट अल्लि पर फरक निर्णयमा पुगेको बताउँदै आएका थिए  ।
त्यो अल्लि पर पुगेको विषय मुख्यतः मार्क्सवाद र मार्क्सवादभित्रको आधुनिक विश्वब्यवस्था सिद्धान्त दृष्टिकोण (मोर्डन ओर्ल्ड सिस्टम थ्यौरी पर्सपेक्टिभ) थियो । आधुनिक विश्व व्यवस्था सिद्धान्त दृष्टिकोणमा इमान्युवल वालेस्टेइनलाई आफूले गुरु मान्दै आएको कुरा मिश्रले अन्तर्वार्ताहरूमा भन्दै आएका छन् । त्रिवि समाजशास्त्र विभागमा एमफिल र पीएचडीको कक्षामा ह्वाइट बोर्डसँगै मिश्रले नै विश्वव्यवस्था सिद्धान्तका सिद्धान्तकारहरू एजी फ्रेंक, वालेस्टेइन, जिओभ्नी अरिघी र समीर अमिनको एउटा सानो फोटो झुन्डाएका छन् ।
संयोग नै भन्नुपर्ला चैतन्य मिश्रको नयाँ किताब काठमाडौंमा सार्वजनिक भएकै दिन वालेस्टेइनको मृत्यु भयो ।
इमान्युवल वालेस्टेइन मुख्य त मार्क्सवादी समाजशास्त्री हुन् । मानवसमाजको विकासको क्रममा भएको शोषणमाथि उनले गरेको व्याख्या समाजशास्त्रसहित इतिहास र अर्थशास्त्रका विद्यार्थीले पनि नपढी उनीहरूको शास्त्रको ज्ञान पूरा हुँदैन । उनी सन् १९३० सेप्टेम्बर २८ मा अमेरिकाको न्युयोर्कमा जन्मेका थिए । सन् १९५१ मा बीए पढ्न कोलम्बिया विश्वविद्यालय प्रवेश गरेका उनले सोही वर्ष अमेरिकी सेनामा जागिर सुरु गरेका थिए । अमेरिकी सैनिको जागिर र विद्यार्थी जीवनलाई अगाडि बढाइरहेका उनले आफ्नो एमएको थेसिसमा ‘म्याकार्थिज्म’ केस स्टडीको रूपमा राखे ।
अमेरिकी सामाजिक कार्यकर्ता जोसेफ म्याकार्थी (जो पनि सिनेटर पनि भए) ले चलाएको कम्युनिस्टविरोधी व्यवहारलाई म्याकार्थिज्म भनिन्थ्यो । शीतयुद्धको समयमा म्याकार्थिले अमेरिकाका विश्वविद्यालय, फिल्म र सरकारी संयन्त्रभित्र अलिकति आलोचनात्मक विचार राख्नेलाई कम्युनिस्ट, सोभियत जासुस, दलाल भनेर सामाजिक रूपमा बहिष्करण गर्ने अभियान उनले चलाएका थिए । यो अभियानलाई केस स्टडीको रूपमा राखिएको थेसिस र त्यसमा आधारित लेखले उनलाई निकै चर्चित बनायो । उनले आफ्नो वेवसाइटमा भनेका छन्, ‘उक्त लेख धेरै चर्चित र साइट भयो अनि मैले आफूलाई राजनीतिक समाजशास्त्रीको रूपमा केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने सोच्न थालेँ ।’ उनले आफूलाई राजनीतिक समाजशास्त्री बनाउन चाहे पनि अमेरिकाको राजनीतिमा आफ्नो चासो नभएको र अमेरिका, युरोपबाहिरको दुनियाँको राजनीतिमा हाइस्कुलको विद्यार्थी हुँदादेखि चासो भएको त्यसमा पनि भारतका गान्धी र नेहरूलाई नजिकबाट नियाल्दै आएको बताएका थिए ।
उनी अन्तर्राष्ट्रिय युवा कंग्रेसमा हुँदादेखि अफ्रिकी नेताहरूको संगतमा पुगे, जुनबेला अफ्रिकी देशहरूमा स्वतन्त्रताको आन्दोलन चलिरहेको थियो । यसपछि उनले आफूलाई अफ्रिकाको विषयमा केन्द्रित गरे । १९५५ मा फोर्ड फाउन्डेसनले दिने पीएचडीको अफ्रिकन फेलोसिप पाए । उनले आइभेरिकोस्ट र गोलकोस्टमा भएको राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनमा केन्द्रित भएर अध्ययन गरे । पीएचडीपछि १९५८ मा कोलम्बिया विश्वविद्यालयमै प्रध्यापन गर्न थाले । १९५५ पछिको २० वर्षमा उनले पूरै अफ्रिका घुमे र धेरै किताब लेखे ।
१९७१ मा उनी क्यानडाको म्याकगिल विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक भएर गए । म्याकगिलमा हुँदा नै उनी अफ्रिकी समाजको अध्ययन गर्ने अफ्रिकन स्टडिज एसोसिएसनको अध्यक्षसमेत भए । उनी १९७० देखि कथित तेस्रो विश्व आफ्नै असक्षमताको कारण नभई नियमित शोषणका कारणले पछि परेको हो भन्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए । १९७४ मा उनको ‘मोर्डन वर्ल्ड सिस्टम’ को पहिलो भोलुम र त्यसमा नै आधारित ‘द राइज एन्ड फ्युचर डेमिस अफ वर्ल्ड क्यापिटालिज्म ः कन्सेप्ट फर कम्पाराटिभ एनालिसिस’ लेख प्रकाशित भयो । जसले उनलाई संसारभर राजनीतिक र प्राज्ञिक दुवै रूपमा चिनायो । त्यसपछिका दिनहरूमा उनले ‘मोर्डन वर्ल्ड सिस्टम’ का चार भागसम्म लेखे । जसमा युरोप र अमेरिकाको वैभव खासमा लुटमा आधारित हो भन्ने विषयमा केन्द्रित थियो ।
१९७६ मा उनी न्युयोर्कस्थित् विङ्घमटन विश्वविद्ययालयको फर्नान्ड ब्राउडेल (जर्मन समाजशास्त्र) सेन्टर फर द स्टडी अफ इकोनोमीको प्रमुख भए र सन् १९९९मा रिटायर्ड नहुँदासम्म विङ्घमटन विश्वविद्यालयमा समाजशास्त्रका प्राध्याकमको रूपमा काम गरिरहे । विङ्घमटन विश्वविधालयको प्राध्यापक हुँदा नै १९९४ देखि १९९८ सम्म अन्तर्राष्ट्रिय समाजशास्त्र संघको प्रमुख भए । २००० मा रिटायर्ड भएदेखि उनी याले विश्वविद्यालयमा वरिष्ठ अनुसन्धाताको रूपमा कार्यरत थिए । २८ वर्षको उमेरमा प्राध्यापक भएका वालेस्टेइन ६१ वर्षसम्म प्राध्यापन र लेखनमा नियमित सक्रिय थिए । दर्जनभन्दा बढी जर्नलको सम्पादन, बीसभन्दा बढी प्राज्ञिक संस्थासँगको आबद्धता, बीसौं विश्वविद्यालयमा लेक्चरर र प्रोफेसर भएका उनका इतिहास र समाजशास्त्रमा चार सयभन्दा बढी लेख प्रकाशित छन् । १९९८ को अक्टुबरदेखि उनले विभिन्न विषयमा हरेक महिनाको एक र १५ तारिखमा नियमित कमेन्ट्री लेख्थे । जुलाई १ तारिखमा उनले आफ्नो अन्तिम अर्थात् ५०० औं कमेन्ट्री ‘दिस इज द इन्ड ! दिस इज द बिगिनिङ !’ शीर्षकमा कोही पनि सधैं बाँचिरहन सक्दैन भन्दै आफूले पनि लेखिरहन नसक्ने बताएका थिए ।
विश्वव्यवस्था सिद्धान्तलाई धेरैले आधुनिकता सिद्धान्तको आलोचनामा आएको मान्छन् । यसलाई धेरै हदसम्म सही मान्न सकिन्छ । आधुनिक हुनु भनेको पुँजी र प्रविधिमा अगाडि हुनु, लोकतन्त्र भनेको निश्चित समयमा निर्वाचन हुनु र पश्चिमा संस्कृतिलाई मान्नु हो भनेर लामो समयदेखि समाजविज्ञहरूले भन्दै आएका थिए । संसारभर उपनिवेशविरुद्ध स्वाधीनताको लडाइँले जितेपछि पनि पश्चिमाहरू आफैँले शोषण गरिरहेका मुलुकमा नयाँ ढङ्गले हैकम जमाउँदै अगाडि बढिरहेका, उपनिवेशबाट निस्कँदै गरेका मुलुकलाई अविकसित, अल्पविकसितजस्ता लेबल लगाएर । विश्वव्यवस्था सिद्धान्तले पश्चिमा समाजविज्ञद्वारा स्थापित समाज विकासको परम्परागत र आधुनिक वा पछौटे र विकसित भन्दै गरिएको व्याख्यालाई तर्क र तथ्य मार्फत खण्डन गर्‍यो । र, नयाँ सोच प्रदान गर्ने काम गर्‍यो । त्यसको ठाउँमा यसले समाज विकासको प्रक्रियामा पछि परेका मुलुकहरू आफ्नै असक्षमताका कारण नभई अर्को मुलुकसँगको असमान शक्तिसम्बन्ध र अर्को मुलुकले गरेको शोषणको कारण पछि परेको निष्कर्ष निकाल्यो ।
वालेस्टेइनका यी दुई लेख र किताब भर्खरै युरोपको शोषणबाट मुक्त भएका मुलुकहरूका राजनीतिज्ञका लागि वैचारिक आधारका रूपमा खडा भए । उपनिवेशको कहर भोगेका राजनेता र समाजविज्ञहरूको हकमा उनको किताब धेरै हदसम्म सही सत्य कुरा थिए । उनी आफैँले पनि ‘मोर्डन वर्ल्ड सिस्टम’ किताब सिद्धान्तभन्दा बढी सत्यको खोज भएको बताएका थिए । यही सत्यको खोजले उनलाई विश्वभर चिनाउने काम गर्‍यो ।
समाजशास्त्रभित्र विश्व व्यवस्था सिद्धान्तलाई ‘नियो मार्क्सिस्ट’ दृष्टिकोणको रूपमा वालेस्टेइनसँगै जर्मन समाजशास्त्री अल्फ्रेड गुन्डर फ्रेंकको परनिर्भरताको सिद्धान्तसँगै पढिन्छ । विश्व व्यवस्था सिद्धान्तको निर्माण वालेस्टेइनले गर्दै गर्दा फ्रेंकले आफ्नो किताब ‘रिओरिएन्ट ः ग्लोबल इकनमी इन एसियन एज’ मा पुँजीवादको विकासलाई १६ शताब्दीपछि मात्र अध्ययन गर्नुभन्दा दुई हजार वर्षअगाडि लैजान पर्नेमा जोड दिएका छन् । फ्रेंकको परनिर्भरताको सिद्धान्त र उनको प्रभावशाली लेख ‘इन्टडक्सन टु रियल वर्ल्ड हिस्टोरी भास युरोसेन्ट्रिक सोसियल थ्योरी×’ मा वालेस्टेइनको व्याख्या गरेको समयलाई तन्काएर १८ सय वर्षअगाडिको एसियाको वैभवको कुरा अगाडि बढाएका छन् । समीर अमिनले धनी देशबाट हुने शोषणबाट बच्न गरिब मुलुकले उनीहरूसँगको सम्बन्ध तोड्नुपर्नेमा जोड दिए ।
समाजशास्त्र अध्ययनका हाम्रा गुरु चैतन्य मिश्रको ‘विश्व व्यवस्था सिद्धान्त’ प्रति झुकाव रहेकाले नेपालको समाजशास्त्र अध्ययनमा यो सिद्धान्तले गहिरो गरी जरो गाडेको छ । चैतन्य मिश्रको लेख ‘डेभलपमेन्ट एन्ड अन्डरडेभलपमेन्ट ः अ प्रेरिलिमिनरी सोसियलजिकल पर्स्पेक्टिभ’ र त्यसपछिका धेरै लेखमा नेपाल सुगौली सन्धिपछि इस्ट इन्डिया कम्पनी त्यसपछि पनि ब्रिटिस भारत र स्वतन्त्र भारतसँगको शताब्दी लामो व्यापार घाटा र शोषणका कारण पछि परेका निष्कर्षहरू ठाउँठाउँमा पाउन सकिन्छ । मानवशास्त्रका प्राध्यापक डोरबहादुर विष्टको किताब ‘फेटालिज्म एन्ड डेभलपमेन्ट ः नेपाल्स स्ट्रगल फर मोडर्नाइजेसन’ मा नेपाल पछाडि पर्नुको मुख्यका कारण बाहुनवाद हो भन्ने मुख्य निष्कर्ष छ । यी दुई प्राध्यापकले मानेका कारण खासगरी कम्युनिस्ट विचारसँग निकट विद्यार्थीहरू ‘विश्व व्यवस्था सिद्धान्त’ का पक्षधर हुनु स्वाभाविक पनि भयो ।
सन् १९८० मा प्रकाशित भएको डभिड सेडन, जोन क्यामरुन र पीएम ब्लाइकीले लेखेको ‘नेपाल इन क्राइसिस’ ले झन् नेपालका मार्क्सवादीहरू प्राज्ञ र राजनीतिज्ञहरूमा गहिरो छाप छोड्न सफल भएको थियो । जुन बुटवलदेखि नारायणघाट, पोखरादेखि बुटवल र काठमाडौंदेखि पोखरासम्मको सडक निर्माणपछि सञ्जालले नेपालमा कत्तिको विकास भयो भनी बेलायत सरकारले अध्ययन गर्न पठाएका पाँज जना अनुसन्धानकर्मीले बेलायत सरकारलाई बुझाएको रिपोर्टका आधारमा लेखिएको थियो । तीमध्येका तीन जनाले किताब लेखेका थिए ।
किताबमा उक्त सडकको निर्माणले नेपालमा विकासभन्दा बढी परनिर्भरता बढेको कुरालाई मसिनो गरी उल्लेख गरिएको छ । कसरी नवलपरासीमा राजमार्ग छेउमा बस्तीहरू बसे र यिनका कारण नेपालका परम्परागत व्यापारी नेवारहरूको व्यापार घटेर भारतीय माडवाडीहरूको हातमा गयो भन्ने पुस्तकमा उल्लेख गरिएको छ । कसरी पुराना मुख्य बजारहरू (पाल्पा, बन्दीपुर) सुनसान भए र सडकको सञ्जालपछि डुम्रे–दमौली गुल्जार भए भन्ने पनि यसमा छ । अन्नमा आत्मनिर्भर नेपाल उक्त सडकको निर्माणपछि भारतप्रति निर्भर भए भन्ने कुरा उनीहरू जोडेका छन् । तत्कालीन पञ्चायत सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि किताब झन् चर्चित भएको लेखकहरूको भनाइ छ । माओवादी द्वन्द्वकालमा पनि यो किताब राख्नेलाई सुरक्षाकर्मीले दुःख दिने गरेको थियो ।
फेरि वालेस्टेइनतिरै फर्किउँ । पश्चिमाहरूले ‘तिमीहरू पछौटे हौ, परम्परागत प्रविधि, राजनीतिक र संस्कार संस्कृतिका हिसाबले तिमीहरूभन्दा हामी विकसित छौं’ भन्दै गरिआएको दावालाई वालेस्टेइनले ‘तिम्रो विकास मूलतः शोषणमा आधारित हो’ भनेर जोरी खोज्ने आधार तयार गरिदिए । जसले कथित् तेस्रो भनिने विश्वका राजनीतिक नेता र समाजविज्ञलाई आत्मविश्वास बढाउने काम गर्‍यो भन्दा फरक नपर्ला । त्यो साथसाथै उनी एक प्रतिबद्ध प्राध्यापक थिए जो लगातार ६१ वर्षसम्म प्राज्ञिक कर्ममा लागिरहे । इतिहास भनेको घटनाहरूको संग्रह मात्रै होइन भनेर लगातार प्राज्ञिक पैरवी गरिरहे ।